Scratchcards अभिलेखागार | पाउन्डस्लोट्स क्यासिनो साइट - £ २०० जमा बोनस!
शीर्षक: रामेसेस रिच स्क्र्याच
रामेसेस रिच स्क्र्याच
शीर्षक: ठूलो खुट्टा स्क्र्याच
ठूलो खुट्टा स्क्र्याच
शीर्षक: भाग्यशाली संख्याहरू
शीर्षक: प्रिमियर रेसि
शीर्षक: प्रिमियर ट्रोटिंग
शीर्षक: छ शूटर लुटर सुन
छ शूटर लुटर सुन
तपाईको भाग्य प्रयास गर्नुहोस् कार्डको सूचीको साथ तपाईसँग हामीसंग छ
Scratchcards एक साधारण क्यासिनो खेलहरू मध्ये एक हो जसमा मुख्य रूपमा कार्डहरू कोर्नु र मिल्दो प्रतीकहरू समावेश छन्। प्रत्येक प्रतीकको फरक मूल्य हुन्छ; तपाईं सबै लुकेका प्रतीकहरू एकैचोटि प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ वा व्यक्तिगत प्रतीकहरूमा क्लिक गर्न र लुकेको प्रतीक प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक पटक जब तपाइँ विजयी संयोजनहरू प्रकट गर्नुहुन्छ, तपाइँ जीतसँग पुरस्कृत हुनुहुनेछ।
दांव Scratchcards मा कम छ र तपाईं ठूलो जीत को उच्च संभावना छ। यो पहिले लटरी खेलको रूपमा सुरू भयो र अब बिस्तारै अनलाईन प्लेटफर्ममा आफूलाई प्यारो क्यासिनो खेलको रूपमा स्थापित गर्‍यो। गेमप्लेले तपाईंलाई तत्काल जीतको अवसर दिन्छ र सरल र अत्यधिक मनोरन्जनात्मक हुन्छ। प्राविधिक विकासको साथ, यो खेल अब तपाइँको मोबाइल उपकरणहरूमा पनि खेल्न सकिन्छ।
पाउन्ड स्लट क्यासिनोमा, हामीसँग तपाईंको जीत प्राप्त गर्नका लागि Scratchcard खेलहरूको विशाल संग्रह छ र तपाइँ तपाईंलाई खेलहरूको मजा लिन पनि दिनुहुन्छ। हाम्रो क्यासिनोमा स्क्र्याच कार्ड खेलहरू खेल्न, निम्न कार्यहरू गर्नुहोस्:
१) स्क्र्याचकार्ड खेल छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं हाम्रो वेबसाइटमा सूचीबाट खेल्न चाहनुहुन्छ
२) शर्तको राशि निश्चित गर्नुहोस् जुन तपाईं दांव लगाउन चाहानुहुन्छ
3) एकचोटी तपाई शर्त तय गरेपछि नयाँ कार्ड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्
4) अब तपाईं व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येक कार्ड प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ वा सबै बटन प्रकट गरेर क्लिक गर्नुहोस् र सबै कार्ड एकैचोटि प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको जीत हाम्रो अनलाइन क्यासिनो मा x10000 को whopping राशि गुणा गर्न सकिन्छ। एउटालाई छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई उत्तम उपयुक्त छ र यो द्रुत जीत क्यासिनो खेल खेल्न सुरू गर्नुहोस्। Scratchcards को खेलमा एक जीत दावी गर्न तपाईलाई सबै matching मिलान प्रतीकहरू छन्। तपाइँले मेल खाने प्रतीकको मान अनुसार पुरस्कार जित्नुहुनेछ। हामीसँग फिचर गरिएको स्क्र्याचकार्ड खेलहरू र हाम्रा प्लेयरहरूको लागि लोकप्रिय खेलहरू छन्।
बिभिन्न Scratchcards फरक विशेषता हुन्छ कि फरक लाई चिन्ह लगाईन्छ तर ती सबै सँग समान गेमप्ले छ जुन खरोंच को छ र लुकेको प्रतीकहरु लाई प्रकट गरीरहेको छ। त्यहाँ जित्ने उच्च अवसरहरू छन् र ती विशाल लोकप्रियताको मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो। तपाइँ कार्डहरू प्रकट गर्नु अघि तपाइँको शर्त ठीक गर्न सम्झनुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ खेलहरू खेल्नु अघि आफ्नो सीप ब्रश गर्नुहोस्।
हामीसँग पुरस्कार र बोनसहरू सबै छन् जुन यसलाई राम्रोसँग खेल्दछन्, हामीसँग स्टोरमा भएका खेलहरूसँग इनाम पाउन धेरै मानिसहरू मध्ये एक बन्नुहोस्। केहि पैसा जम्मा गर्नुहोस् र बिभिन्न स्क्र्याचकार्ड गेमहरू खेल्न सुरू गर्नुहोस् जुन हामीसँग तपाईंको लागि छन्, तपाईंसँग पनि बढी जित्ने संभावना छ र त्यो द्रुत रूपमा। सरल गेमप्ले र जीतको भारी अवसरहरू के हुन् जसले तपाईंलाई अस्थिर राख्छन्। अब हतार गर्नुहोस् !! पाउन्ड स्लट क्यासिनोमा आफूलाई दर्ता गर्नुहोस् र उत्तम स्क्र्याचकार्ड खेलहरूको रोमाञ्चक र उत्साहमा लिप्त गर्नुहोस्।
यहाँ सम्मिलित हुनुहोस्